पत्याउनु हुन्छ ? पशुपतिको जग्गाको मुल्य ५४ रुपैयाँ ! के हो खास कुरा ? — Motivatenews.Com
काठमाडौं – काठमाडौं जस्तो महँगो ठाउँमा जग्गाको मुल्य कति होला ? जग्गा भाडामा लिनपरे कति मुल्य पर्ला ? प्रति आनाका दरले अनुमान लगाउँ पाँच हजार, दश हजार, १५ हजार या २० हजार । तपाईको अनुमान गलत सावित हुनेछ । किन भने पशुपतिको जग्गाको मुल्य आनाको जम्मा ५४ रुपैयाँमा भाडामा लगाएको पाइएको छ ।
यति सस्तो मुल्यमा जग्गा प्रयोग गर्ने पाउने भाग्यमानि अरु कोहि नभई नेपालको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हो। जसले पशुपतिनाथ मन्दिर गुठीको जग्गा चलन चल्तीभन्दा न्यून मूल्यमा भाडामा चलाएको छ। गुठीको स्वामित्वमा रहेको एक हजार एक सय ६७ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेवापत विमानस्थलले वार्षीक एक करोड २१ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ ।
विमानस्थलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई प्रतिरोपनी मासिक आठ सय ६४ रुपैयाँ मात्रै तिर्दै आएको छ । विमानस्थलले कुल तिर्ने भाडालाई हिसाब गर्दा प्रतिआना मासिक ५४ रुपैयाँ मात्रै पर्छ।
हाल विमानस्थलले प्रयोग गर्दै आएको धावनमार्ग, नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण कक्ष र गल्फकोर्ट भएको जग्गा पशुपतिनाथ गुठीको हो । २०३९ पुस २३ गते तत्कालीन पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समिति र तत्कालीन हवाई विभागबीच जग्गाभाडा सम्झौता भएको थियो ।
सो समयको सम्झौतामा विमानस्थलले गुठीलाई जग्गामा उत्पादन हुने अन्न बराबरको पैसा बुझाउँथ्यो । त्यतिबेला विमानस्थलले गुठीको जग्गा प्रयोग वापत वार्षिक एक हजार एक सय ६७ मुरी अन्न बराबरको रकम बुझाउने गथ्र्यो ।